Bahrain: Hanina An’i India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2017 4:26 GMT
Namariparitra i MuJtAbA fa nandeha ny fotoana hatramin'ny niverenany tao Bahrain mba hiala-sasatra [Ar]:
Tsaroako ireo andro sarotra tamin'ny volana Desambra, izay nandalovako tamin'izaho tao India. Nangirifiry sy nahasorena izany. Tahaka ny olona adala aho ary tsy afaka natory nandritra ny adin'ny telo mahery tamin'ny alina satria nijery aterineto aho mba hanaraka ny fivoarana farany eny ifotony. Tamin'izany ny Bahrain Online no lasa namako any ivelany. Na dia nahitana vaovao manitatra aza ao, dia ahitana vaovao marobe ihany koa.